Ụlọ | Mgbapụta na mgbapụta
Usoro Osimiri United
Chọta onye nkesa
Bụrụnụ Onye Want Chọrọ Trulybụ n'ezie!
Ngwá ọrụ zuru oke gị maka mgbanwe nke onwe.
Bee site na mmeghachi omume na omume dị mma, wee bụrụ onye ị bụ n'ezie.
Atumatu Alchemical bu ihe eji emeghari ohuru nke eji emegharia ihe iji mee ka ị bụrụ onye eburu n'uche mgbe nile.
Atọ n’Ime Otu nwere usoro ọgwụgwọ ọrịa alchemized atọ:
Blue Lotus usọbọ
Usoro ọgwụgwọ atọ a na-arụkọ ọrụ ọnụ iji kpochapụ ihe na-ejikọ anyị. Nke ọ bụla n'ime usoro ọgwụgwọ ndị a nwere ọrụ pụrụ iche ọ ga-arụ na ileghara ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze anya, usoro na ncheta nke na-eme ka anyị guzosie ike na nkwenye na omume ndị na-adịghị enyere anyị aka.
Nleta Nleta Ahụ
Gbanyụọ akwụkwọ ndị ọzọ
Enwere m nkwenye maka nnwere onwe Nchịkọta ahụ na-achịkọta nkọwa m site n'ụdị a.
Ihe Alchemical Technology nke Oge Ochie
Mgbapụta na-esetịpụ ọkọlọtọ maka ebe ọhụụ nke njikarịcha mmadụ na ịzụlite ngwá ọrụ ịmara. Ngwakọta oge ochie nke ọgwụgwọ alchemical a kpọlitere n'ọnwụ ma jupụta na nkà mmụta sayensị a na nso nso a, na-eweta ndụ ọhụrụ na ngwá ọrụ dị ike ma dị omimi ma na-eme ka obi dị mma.
Ihe ngwọta nke na-agagharị okwu ahụ n'ikike ya iji kwado ndị mmadụ n'otu n'otu na ịmepụta uche, ahụ na mkpụrụ obi site na idocha ihe karmic na mgbochi mmetụta uche. Inwe onwe gị pụọ na drainage ndị a dị ike na-enye ike azụ azụ ka anyị nwee ike ịbụ ndị a chọrọ ka anyị bụrụ site na mmalite, ntọhapụ na n'efu.
Na-esote ntụziaka oge ochie, nke a họọrọ ahọpụtara nke ọma nke ihe ndị sitere n'okike, essences na alchemical mixtures maka afọ nke oge a.
Ike Dị Nsọ
Mgbapụta na-etinye aka na omenala ime mmụọ na nke dị nsọ. Nke a na-ekpughe ike ike maka iche echiche na mmetụta uche.
Mmiri dị n'otu
Na-eme ka mmiri nke ụwa dị n'otu site n'ikwe ka nnwere onwe na-atọ ụtọ ma jikọta ya na ebe dị nsọ nke ụwa iji jikọta ha niile.
Gịnị ka ndị ọzọ na-enwe na nnwere onwe?
Nụrụ ihe ndị ọzọ nwere ikwu banyere ahụmahụ ha na nnwere onwe. Àgwà nke mgbanwe na anụ ahụ, uche, mmetụta uche na nke ime mmụọ!
Lee More Nyocha
Ọdịnihu nke ọdịnihu
Ihe nzuzo nke ndị oge ochie, kpughere.
Igwe ihe omuma nke ime mmuo na nke ihe omuma nke meputara uzo ohuru iji bulie ndu nke onye. Mgbapụta na-eji nkà na ụzụ ọhụrụ achọtara na usoro oge ochie, nke a na-eme ka ndị niile nwee ohere.
elekwasị anya, ike & nghazi
Mgbe a naghị eji anya eme ihe na agba ọsọ ochie nke a na-emepụsị n'ahụ anyị, anyị nwere ike iji ike anyị niile na-arụ ọrụ ọ bụla. Ọ pụtakwara na anyị anaghị eji oge anyị nọrọ n'oge gara aga ma ọ bụ na-echegbu onwe anyị maka ọdịnihu. Nke a na-esiwanye ike na ahụ, anyị kwesịkwara ịrahụ ụra ma ọ bụrụ na anyị na-aga ngwa ngwa ma banye na ntụrụndụ.
Mmetụta nke mmetụta uche
Ghichaa ochie, tinye ohere maka ihe ọhụrụ ahụ
Mgbe anyị kpochapụrụ ihe omume nke anyị na-ejikarị eme ihe dịka akụkụ nke akụkọ ihe mere eme anyị ma mụta ihe nchekwa, anyị agaghịzi ejide onwe anyị na mmetụta mmetụta uche nke ndụ anyị. Mgbapụta na-eme nke a site n'iwebata ya niile n'elu ka a hụ ya, wee nwee mmetụta wee tọhapụ ya ozugbo. Mgbe ahụ, mmetụta uche nwere ike ibili ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọrụ ọ bụla site n'oge gara aga iji zaa n'ụzọ ọ bụla, anyị nwere ike ma ọ bụrụ na anyị esoro ha ma ọ bụ ma ọ bụrụ na enweghi ike ijide ha n'ọnyà.
Mgbe ahụ, anyị nwere nhọrọ iji wepụ lotus na mmiri ahụ ma ghara ịda.
Ikike zuru ezu nke okike
Laghachi n'ụlọ gị
Tinye n'ime ike n'ime nke ahụ doro anya banyere ntụziaka, nzube na ozi gị na ndụ a. Mgbapụta na-akwado onye na-emeghe ruo n'ókè doro anya nke mmadụ, na-eme ka ha jikọta na nsụgharị n'ime ha, na-eduzi onye ọ bụla n'oge ọ bụla na ọnọdụ nke ụba, ịdị jụụ na obi ụtọ.
Mgbapụta gị, echere.
Ụdị Egwuregwu Ọdịdị Na-ahụ Maka Egwuregwu Egwuregwu
Ngwurugwu zuru oke nke ihe ndi ozo, ejikere nke oma, alchemized na synthesized iji mepụta, LIBERATION.
Akara oge ochie nke alchemical mere site na 9 bara nnukwu uru nke ọ bụla nke ọkụ ọkụ 100 ugboro iji gosiputa ha kasị dịghachi adịghachi na ikike karmic ike.
Otu ịnweta nke mmiri dị ọcha ma na-eme dịka ọta nke electromagnetic. Ebe ọ bụ na ọbara na-abụkarị mmiri, nke a nwere mmetụta dị omimi ma dị ike na ọbara nke na-eburu n'uche anyị.
Achịkọta anwụrụ na ike sitere na ọkụ 4 nke na-ere ọkụ ruo afọ 50 ikpeazụ. Ọkụ nke ise bụ anyanwụ. Aja a na-anọchite anya anya nke afọ iri ise nke mgbanwe na nhicha.
A Durga vibrational sound mantra maka mgbanwe na mgbanwe, na-ekwe ka ebe nke ihe omume na-emeghe ka nke ọma dị ka ihe doro anya
Na-eme ka ọ bụrụ ihe nwatakịrị nwatakịrị ka ọ na-enwe ọhụụ dị ntakịrị, obere mmetụta nwatakịrị na-eleba nru uhie uhie maka oge mbụ.
Ngwurugwu na-enye aka na-enyere aka na-ekekọta ihe niile na-emepụta ihe, na-eme ka ha dịrị na nhazi
Ọpụpụ nke ụwa.
Ịgbasa nnwere onwe site na netwọk nke ndị na-ekesa mpaghara na ụwa. Ijikọta ume, mmiri na ndị mmadụ n'ụwa site na ngwọta a dị ike.
Mgbapụta na mgbapụta
Project nke Mmiri dị n'otu
Atọ n’Imepe Alchemical
Mgbapụta Mgbapụta - 10ml
Atọ n’Ime Otu
Ngbapụta - 10ml
Ntọhapụ - 10ml
Akwụsịghị Ngwọta Ahụike Nwepụ
© Copyright 2018 ikike niile echekwara Ngwaahịa ọ bụla a tụlere ma ọ bụ kpọsaa bu n'uche iji chọpụta, agwọ ọrịa, gwọọ ma ọ bụ gbochie ọrịa ọ bụla. Nsonaazụ ihe ngosi abụghị ihe a na-ahụkarị. Ndị ahịa nwere ike natala akwụkwọ onyinye mgbe ha tinyechara akaebe ha. Ọ bụrụ na ị dị ime, na-enye nwa ara, na-a medicationụ ọgwụ, ma ọ bụ na-arịa ọrịa, gakwuru dọkịta gị tupu ị na-eji mgbakwunye nri ọ bụla. ^ Onyinye edere na saịtị a, tinyere atụmatụ AutoShip, bara uru maka ndị ahịa na-ere ahịa naanị, ọ bụghị ndị na-eme ya ma ọ bụ ndị na-ere ahịa. Nweta mbufe a na-akwụ ụgwọ maka ndị ahịa US naanị.